Togo (film) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖိုင်:Togo film poster.jpg
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၉ (၂၀၁၉-၁၂-၂၀)
Togo သည် 2019 ခုနှစ်အမေရိကန် ဒရာမာရုပ်ရှင် ဒစ္စနေး + တွင်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်တွင် " Race of Mercy " ဟုလည်းလူသိများသော ၁၉၂၅ သွေးရည်ကြည် ၌အဓိကဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး ဖြစ်သော Nome သို့ပြေးခဲ့သည် ကပ်ရောဂါကနေ ဘာမှမ 
အဆိုပါရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာခဲ့သည် Ericson Core ကင်မ် Zubick ထုတ်လုပ်, တွမ် Flynn ကကရေးသားခြင်းနှင့်သရုပ်ဆောင် Willem Dafoe, Julianne Nicholson, ခရစ္စတိုဖာ Heyerdahl, မိုက်ကယ် Gaston, မိုက်ကယ် McElhatton, ဂျေမီ McShane, မိုက်ကယ် Greyeyes, Thorbjørn Harr, Shaun Benson နှင့် နီကိုလိုင် Nikolaeff ။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊
Leonhard Seppala သည်သူ၏ခွေး Togo နှင့် ၁၉၂၅ ခုနှစ်သွေးရည်ကြည် Nome သို့ပြေးလွှားနေသည့်အချိန်တွင်ရုပ်ရှင်သည်ပြတ်သွားသည်။
၁၉၁၃ တွင် ဆပ္ပလာ နှင့်သူ၏ဇနီး Constance တို့သည်မွေးခါစ Siberian Husky pup ကိုကြိုဆိုကြသည်။ ဆပ္ပလာ သည်သူ၏အားနည်းသောပြည်နယ်ကြောင့်ချက်ချင်းအနားယူရန်အခိုင်အမာပြောကြားသော်လည်း Constance ကသူအားအခြားသူများနှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်ရန်စည်းရုံးသည်။ ခွေးကလေး Husky ဟာသူဟာလေ့ကျင့်ရေးလုပ်နေတုန်း ဆပ္ပလာ ရဲ့ခွေးအဖွဲ့ကိုလုယူဖို့ခွေးကလေးကိုအဆက်မပြတ်ရှောင်တိမ်းရင်းလက်တဆုပ်စာဖြစ်သွားသည်။ Husky ကိုနှစ်ကြိမ်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားပြီးနောက် ဆပ္ပလာ ကသူ့ကိုအခြားသူများနှင့်ပြေးရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သူသည်အခြားခွေးများကိုကျော်တက်နိုင်လောက်အောင်လုံ့လရှိသူဖြစ်ကြောင်းသူအံ့အားသင့်မိသည်။ သူသည်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး TōgōHeihachirō ပြီးနောက်သူ့ကိုတိုဂိုဟုခေါ်ဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ သူသည် Alaska All Sweepstakes ကိုအောင်မြင်စွာအနိုင်ရသည့်အထိတိုဂိုနှင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒေသခံကျော်ကြားမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
1925 ခုနှစ်တွင် ဆုံဆို့နာ ဖြစ်ပွားမှု; အများအားဖြင့်ကလေးများထိခိုက်သည်။ မြို့တော်ဝန်ဂျော့မေ နာဒ် မှ Nenana မှသွေးရည်ကြည်ကိုထုတ်ယူရန်စီစဉ်သော်လည်းရာသီဥတုပြင်းထန်မှုကြောင့်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဆပ္ပလာ သည် Togo နှင့်အခြားခွေးများကိုသွေးရည်ကြည်နှင့်ပြန်လည်စုဆောင်းရန်ယူဆောင်လာသည်။ တိုဂိုသည် ၁၂ နှစ်အရွယ် ( ခွေးအသက် အတွက် အိုမင်းခြင်း ) ကြောင့် Constance သည်စိုးရိမ်ပူပန်စရာဖြစ်လာသည်။ ဆပ္ပလာ နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည်မုန်တိုင်းထန်သောရာသီဥတုကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီးတိုကျိုသည်ပင်ပန်းသည်ဟုဒေသခံဆရာဝန် Atiqtalik ကပြောသောစခန်းတွင်အနားယူသည်။ ဆပ္ပလာ မိုင်ဘို့ဆက်လက်; ယခုအေးခဲနေသော Norton Sound ကို ဖြတ်၍ အန္တရာယ်ရှိသည့်ဖြတ်လမ်းကိုယူခြင်း။
နောက်ဆုံးတွင် ဆပ္ပလာ သည်သွေးရည်ကြည်ကိုယူဆောင်လာပြီးနောက်နေ့မှထွက်ခွာနိုင်သည့်သူရဲကောင်းဟင်နရီအိုင်ဗင်နိုးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဆပ္ပလာ နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည် Sound ကိုနောက်တစ်ခေါက်တွင်သူသည်တိုဂိုအားရေခဲတုံးကိုဆွဲထုတ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ Atiqtalik နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်တိုဂိုသည်သူသေနေသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဆပ္ပလာ သူ, တိုဂိုနှင့်အဖွဲ့သည်ပြန်လည်ထူထောင်အဖြစ်သူ၏အသင်းကိုဂျိုး Dexter ရဲ့တပ်စခန်းသို့ပြန်ရရှိသွားတဲ့။ Nome ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ Gunnar Kaasen ကိုသွေးရည်ကြည်ထုတ်ပေးသည်။ သတင်းထောက်တစ် ဦး ကသူ၏ခွေးလေးကို Balto အားစိတ်ပျက်စေသော Constance ကိုကယ်တင်ခဲ့သောသူရဲကောင်းအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
ဆပ္ပလာ မှပြန်လည်ရောက်ရှိ Nome နောက်၊အဘယ်အရပ်တစ်ခုလုံးကိုမြို့မှလာကမိမိအိမ်မှကျင်းပကိုမဆိုရဲ့အောင်မြင်။ ဆပ္ပလာ နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာစိတ်ဆိုးသောအခါပျောက်ကင်းမည်ရှိမိန်းကလေးတစ်ဦးလီ deduces ကြောင်းကိုမဆိုအသေခံ။ ဆပ္ပလာ ဖို့ရည်ရွယ်ထားဆက်လက်သင္တန္းသူမပါဘဲခွေးကိုမဆို(သူရသေးစားဒဏ်ရာစဉ်အတွင်း)၊ဒါပေမယ့်သူကရပ်တန့်ရန်ငြင်းဆန်နှင့်နှီးချ ဆပ္ပလာ သူကြိုဆိုသူ့ကိုဖွင့်လက်နက်နှင့်အတူသင်။ နောက်နှစ်နှစ်၊ကိုမဆိုဖိတ္ေခှေးသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့သက်သေပြဖို့အကျော်ကြားသူတို့ကိုယ်ပိုင်လက်ျာအတွက်။ ကိုမဆိုနောက်ဆုံးမှာပယ်ရှားဖြတ်သန်းပြီး ၁၉၂၉ တူ ဆပ္ပလာ ဆက်လက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခွေး။ ခေါင်းစဉ်ကဒ်အဆုံးမှာဖော်ပြနေစဉ်အကူအညီလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အထုအတွက်မိမိအဂုဏ်၊ကိုမဆိုအမေ့အောင်အဘို့အအရှည်ဆုံးပွေးနှင့်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အမှန်၏သူရဲကောင်း Nome။
Leonhard Seppala အဖြစ် Willem Dafoe
Constance Seppala အဖြစ် ဂျူလီယန်နီကိုးလ်ဆင်
မြို့တော်ဝန်ဂျော့ခ်ျ Maynard အဖြစ် ခရစ္စတိုဖာ Heyerdahl
ဒေါက်တာ Curtis Welch အဖြစ် ရစ်ချတ် Dormer
ဘီလ် Clark ကအဖြစ် Adrien Dorval
လီ Burdett အဖြစ် Madeline Wickins
မိုက်ကယ် Greyeyes Amituk အဖြစ်
Atiqtalik အဖြစ် Nive Nielsen
Thorbjørn Harr သည်ချာလီ Olsen အဖြစ်
စာရာ Foley အဖြစ်ကက်သရင်း McGregor
Jafet Lindeberg အဖြစ် Michael McElhatton
ဂျိုး Dexter အဖြစ် မိုက်ကယ် Gaston
Gunar Kaasen အဖြစ် Shaun Benson
Scotty Allan အဖြစ် ဂျေမီ McShane
၁၉၈၈ ခုနှစ်မေလ ၁၆ ရက်တွင် Ericson Core သည်ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးမည်၊ Kim Zubick သည်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Disney + တွင်လည်း တင်ဆက် လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။  ထို့အပြင် Willem Dafoe သည် Togo ပိုင်ရှင် Leonhard Seppala အဖြစ်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံကြေငြာခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် ၂၀၁၈ တွင် Thorbjørn Harr သည်ရုပ်ရှင်၏သရုပ်ဆောင် မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ 
ဒီရုပ်ရှင်မှာပါတဲ့ခွေးအများစုဟာ AB Snow Canw မှာရှိတဲ့ Snowy Owl Sled Dog Tours Inc. Snowy Owl မှ Hugo နှင့် Mackey တို့ကိုရုပ်ရှင်တစ်လျှောက်လုံး Togo, Diesel ၏မျက်နှာကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ 
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Leonhard Seppala နဲ့ Togo တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းအပေါ်သစ္စာခံဆဲဖြစ်သည်။ တကယ့်ဘဝ၌အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောရုပ်ရှင်၏ "ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား" အချိန်နှစ်ခုတွင်တိုဂိုသည်သူ၏ဒုတိယပိုင်ရှင်အားဖန်သားပြင်ပြတင်းပေါက်ကခုန်။ ထွက်ပေါ်လာပြီးသူ၏စွမ်းအားကို အသုံးပြု၍ ဆပ္ပလာ ၏စလင်းပိုင်ကို Norton Sound မှဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။  သို့သော်ရုပ်ရှင်ထဲတွင် ဆပ္ပလာ နှင့်ဆုံဆို့နာရောဂါကူးစက်နိုင်သည့်ကလေးအမြောက်အမြားတွင်ပါ ၀ င်သည့် Constance ၏သမီး Sigrid ကိုချန်လှပ်ထားသည်။ ဆပ္ပလာ ၏ Balto အားခရက်ဒစ်ရယူခြင်းအပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိုမူပြသထားခြင်းမရှိသော်လည်း Constance သည်သတင်းများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ အစစ်အမှန်ဘ ၀ တွင် ဆပ္ပလာ သည်ခွေးသူရဲကောင်းရောနှောခြင်းကိုသူ၏သဘောမကျမှုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ Togo သည်ကျန်ရှိနေသေးသောကျန်ရှိနေသေးသော ဆပ္ပလာ နှင့်အတူတကယ့်ဘဝ၌နေထိုင်စဉ် Togo ကိုအဲလစ်ဇဘက် Ricker အမည်ရှိမိန်းကလေးတစ် ဦး အား Maine ရှိလမ်းတစ်လျှောက်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ သူ၏အကောင်းဆုံးခွေးနှင့်နှုတ်ခမ်းကွဲလွဲမှုတွင် ဆပ္ပလာa က“ တိုဂိုကသူနဲ့ငါနဲ့ဘာကြောင့်မသွားတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်သလိုကျွန်တော့်ဒူးကိုခြေထောက်သေးသေးလေးလေးတစ်ခုချပေးလိုက်တဲ့မတ်လမနက်ခင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူရတာဝမ်းနည်းစရာပါ။ ငါတိုဂိုထက်ပိုကောင်းတဲ့ခွေးမရှိခဲ့ဘူး။ သူ၏ကြံ့ခိုင်မှု၊ သစ္စာရှိမှုနှင့်ဉာဏ်ရည်တို့ကိုတိုးတက်အောင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ တိုဂိုစဉ် Alaska လမ်းကြောင်းခရီးထွက်သောအကောင်းဆုံးခွေးဖြစ်ခဲ့သည်။ " 
ရုပ်ရှင်၏နောက်တွဲယာဉ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ တိုဂို သည်ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ 2019 တွင် Disney + ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပွဲထွက်ခဲ့သည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်စုစည်းမှုဝက်ဘ်ဆိုက် Rotten Tomatoes တွင်ရုပ်ရှင်သည်ထောက်ခံချက် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းအပေါ် အခြေခံ၍ ၉၄% နှင့်ပျမ်းမျှအဆင့် ၇.၄၅ / ၁၀ ကိုရရှိထားသည်။  Metacritic တွင်ရုပ်ရှင်သည်ဝေဖန်သူ (၇) ဦး ကို အခြေခံ၍ ၁၀၀ အနက် (၇၁) နှုန်းဖြင့်ပျမ်းမျှရမှတ်ရှိပြီးယေဘူယျအားဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများဖြစ်သည်။ 
ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2020 ရုပ်မြင်သံကြား - မူရင်းရှည်ပုံစံ style="background: #FFD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="partial table-partial"|ဆိုင်းငံ့နေဆဲ 
↑ Mark Isham Scoring Disney's 'Togo'။ June 28, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Remember Family Films? Disney Plus Is Making 'Em Like They Used To။ November 21, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Willem Dafoe to Star in Disney Adventure Movie 'Togo' (Exclusive) (in en) (July 12, 2018)။ July 14, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ '22 July' Actor Joins Willem Dafoe in Disney Adventure Drama 'Togo' (Exclusive) (in en) (December 10, 2018)။ December 10, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Snowy Owl Sled Dog Tours (in en)။
↑ Kiefer၊ Phillip (December 20, 2019)။ The True Story Behind Disney's 'Togo'။ December 24, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ History vs. Hollywood - Togo (2019)။ December 24, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Togo (2019)။ December 26, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Togo Reviews။ December 21, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ WGA TV Nominations: 'The Crown', 'Mindhunter', 'Watchmen' Among Contenders – Complete List။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Togo_(film)&oldid=497606" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၂:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။